Wafti Qurba joog ah oo Booqday Gobolka Erer. - Cakaara News
Wafti Qurba joog ah oo Booqday Gobolka Erer.
Fiiq( cakaaranews) sabti, 23ka July, 2016 Ka dib markii la soo gabagabeeyay kulanwaynihii todobaadka qurba joogta ayaa waxay qurba joogtii ka soo qaybgashay kulanwaynahaasi qaarkood booqdeen gobolada iyo degmooyinka deegaanka kuwaasi oo soo indha indhaynaya mashaariicaha horumarineed ee ka hirgalay deegaanka sanadihii ugu danbeeyay.
Haddaba waftigan oo uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Erer mudane Axmed xaaji ayaa waxa hogaaminayay qurba joogtan ugaas Xasan Maxamed Cabdisalaan iyo gudoomiye ku xigeenka jaaliyada DDSI wadanka Australia mudane Sheikh Xasan.
Wafigan oo ay ujeedata socdaalkoodu ahayd in ay booqdaan mashaariicaha horumarineed ka jira gobolka Erer ayaa waxaa si wayn loogu soo dhaweeeyay tuulada dun-dumaca ee degmad fiiq. Waxayna booqdeen mashruuc dhinaca biyo galinta ah oo laga hirgaliyay tuulada dundumacad. Wafigan oo uu wada socdaalkan booqashada ah ayaa waxaa kale oo siwayn loogu soo dhaweeyay magaalada fiiq ee xarunta gobolka Erer halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen maasulka gobolka, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada fiiq.
Waftigan qurba joogta ah oo la hadlay bulshadii soo dhawaysay ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin horumarkan wayn ee ka hirgalay deegaanka ee ay indhahooda ku soo arkeen waxayna sheegeen in dhankooda kaalin balaadhan ka qaadanayaan horumarkan oo ay maalgashi ku samaynayaan deegaanka gaar ahaan xarunta gobolka Erer ee fiiq.